Bangkok Airways ayaa ku dhawaaqday Hakinta Bangkok - Duulimaadyada Samui
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Bangkok Airways ayaa ku dhawaaqday Hakinta Bangkok - Duulimaadyada Samui
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Bangkok Airways waxay ku dhawaaqday inay hakisay duulimaadyadii Bangkok - Samui
Bangkok Airways Public Company Limited Limited waxay ka qoomameyneysaa inay ku dhawaaqdo joojinta ku meel gaarka ah ee duulimaadyada Bangkok - Samui laga bilaabo 21 July 2021 wixii ka dambeeyay.
Rakaabka ay saameysay hakinta duulimaadka waxaa laga yaabaa in laga dhaafo khidmadaha dib-u-xisaabinta ama waxay dalban karaan lacag-celin ah foojarka safarka ee tikidhada mustaqbalka.
Rakaabka doonaya inay wax ka beddelaan safarkooda oo aan lahayn taariikh safar oo cusub oo cayiman waxay ku soo gudbin karaan codsigooda khadka tooska ah 24 saacadood ka hor taariikhda la qorsheeyay ee bixitaanka.
Sida ku xusan ogeysiiska ka socda Hay'adda Duulista Rayidka ee Thailand (CAAT) ee la xiriirta tilmaamaha hawlwadeennada garoonka diyaaradaha iyo hawlwadeennada hawadda ee waddooyinka gudaha inta lagu jiro xaaladda faafa ee cudurka Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (No. 3), si loogu hoggaansamo kahortaga howlaha ilaalada iyadoo la raacayo shuruudaha iyo amarrada gobolka, Bangkok Airways Dadweynaha Shirkad Xaddidan ka qoomameynayaa ku dhawaaqida joojinta ku meel gaarka ah ee Bangkok - Samui (vv) laga bilaabo 21 Luulyo 2021.
Intaas waxaa sii dheer, shirkaddu waxay sidoo kale jeclaan laheyd inay ku dhawaaqdo dib u dhigista qaar ka mid ah waddooyinkeeda gudaha ee loo qorsheeyay inay dib u bilowdo 1-dast ee Ogosto 2021 illaa iyo ogeysiis dheeri ah. Wadooyinka dib loo dhigay waxaa ka mid ah: Bangkok - Chiang Mai (vv), Bangkok - Phuket (vv), Bangkok - Sukhothai (vv), Bangkok - Lampang (vv) iyo Bangkok - Trat (vv)
Si kastaba ha noqotee, waddooyinka Samui ee hadda xiran, duulimaadyada qaadaya transit / wareejinta rakaabka caalamiga ah, ee isku xiraya Bangkok (Suvarnabhumi) ilaa Koh Samui (3 duulimaad maalintii) wali waa loo shaqeyn doonaa si caadi ah. Intaa waxaa sii dheer, wadada Samui - Phuket (vv) wali waxay heli doontaa duulimaadyada 4 usbuucii (Isniinta, Arbacada, Jimcaha iyo Axadda) si loo taageero mashruuca 'Phuket Sandbox'.
Rakaabka ay saameysay hakinta ku meelgaarka ah ee duulimaadka waxaa laga yaabaa in laga cafiyo lacag bixinta dib-u-qorista ama haddii kale ay codsan karaan lacag-celin ah foojarka safarka si loogu isticmaalo tikidhada mustaqbalka. Rakaabku waxay sameyn karaan wixii isbedel ah ee lagama maarmaanka ah illaa 24 saac kahor duulimaadkooda.
Rakaabka doonaya inay wax ka beddelaan safarkooda oo aan lahayn taariikh safar oo cusub oo cayiman (tigidh furan) waxay ku soo gudbin karaan codsigooda khadka tooska ah 24 saacadood ka hor taariikhda la qorsheeyay ee bixitaanka. Diyaaraddu waxay isticmaali doontaa macluumaadka lagu bixiyo foomka noocaas ah si ay u sii hesho rakaabka.
Bangkok Airways waxay raaligelin ka bixineysaa cilladda soo wajahday, shirkadduna waxay weli u heellan tahay amniga iyo nadaafadda rakaabkeenna iyo shaqaalaheenna oo ah tan ugu weyn. Duulimaadyadu waxay si adag u fuliyaan tallaabooyin ilaalin ah si looga hortago faafitaanka COVID-19.